म नहुँदा श्रीमतीलाई बेरंगी नबनाउनु |
म नहुँदा श्रीमतीलाई बेरंगी नबनाउनु
प्रकाशित मिति :2017-02-11 10:00:27
रातो टीका लगाएको आफ्नो तस्बिर फेसबुकमा पोष्ट गर्दै गतहप्ता लिली थापाले एकल महिलालाई रातो टीका अभियान चलाउन उत्प्रेरणा जगाइन् । उनको आव्हानपछि धेरै एकल र अन्य महिलाले रातो टीका लगाएका आफ्ना तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरेर ऐक्यवद्धता जनाए । एकल, अझ परित्यक्त जीवनको चोट यति गहिरो हुन्छ, त्यसका अगाडि यस्ता सामाजिक अभियान केवल प्रदर्शन मात्र लाग्छन् । बाघको चित्र कागजमा कोरेर प्रस्तुत गरिएको कौशल र जंगलमा बाघसँग लडाईं नै लडेर बाँच्नु बीच जे भिन्नता छ, त्यस्तै लाग्छ मलाई एकल जीवनको सन्ताप र यस्ता अभियान बीचको सम्बन्ध ।
काकीहरू भन्थे, ‘यस्तो भर्खरकी मान्छेलाई के को त्यस्तो लुगा लगाउनु पर्‍यो, रातै ल्याइदिए भइगयो नि !’ तर, उनीहरू त्यो निर्णयमा सामेल थिएनन् । निर्णय त ठूलो’बा, काकाहरुकै लागू भयो । आमालाई त्यही ‘विधुई टोप्रेल’ ल्याइयो, अर्थात्, हरियो, सेतो, निलो मिसिएको, रंग फुंङ्ग उडेको फरिया ।मैले आफ्नो जीवनका ८ वर्ष मात्रै बुबासँग बिताएँ । बुबाबारे जति सम्झना छ, उहाँको बिरामी अवस्था मात्रै मेरो स्मृतिमा आउँछ । बुबाले मेलापात, घाँस दाउरामा आमालाई सघाउन सक्नुभएको मैले कहिल्यै देखिनँ । हुन त, आमाको विवाह नै ६ वर्षको उमेरमा भएको रे ! मामाघरको हजुरबुबा हजुरआमाले छोरा जन्मिने आशामा मेरी आमाको कन्यादान गरिदिएका रे ! त्यतिबेला बुबाको उमेर २५ अनि आमाको उमेर ६ वर्षको थियो । अनमेल विवाहको शिकार भएर आमाले आफ्नो जीवन गुजार्नुभयो, पुरुषवादी समाजको दास भएर जिउनुप¥यो ।
दाजुभाइ, बुबाहरू सोच्नुस् त, तपाईंको श्रीमतीको मृत्यु हुँदा तपाईं जति विक्षिप्त हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा कयौं गुणा विक्षिप्तता महिलामा आउँछ कि आउँदैन । तर, महिलाले अर्को जन्म लिएझैं उराठ जीवन लिएर किन बस्नुपर्ने ? एउटै जीवनमा महिलाले कतिपटक रुप फेर्नुपर्ने ? कहिले विवाहको नाममा । कहिले विधवाको नाममा । के हामी एक पूर्ण मानवचोला बाँच्न पाउँदैनौं ? अब तपाईंहरूले सिकाइदिनुस् पुरुषको अस्तित्व जति पूर्ण छ महिला पनि एकमै पूर्ण छिन् । महिला भने कहिल्यै एक्लै पूर्ण हुँदिनन् भन्ने संरचना अब हामीले भत्काउनुपर्छ । लिली थापाहरूलाई रातो टीका अभियान होइन महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वको अभियान चलाउन अभिप्रेरित गर्न सम्पूर्ण श्रीमानको पहल होस् ।